The Hinds 'Feet Farm Day Programme ishanduko yeparadigm kubva kumaitiro ekurapa echinyakare kuvanhu vanorwara nekukuvara kwehuropi kuenda kumuenzaniso unobatanidza hutano hwakakwana uye hutano hwakanaka, huchipa nhengo simba kune basa uye zvinoreva muhupenyu mushure mekukuvara. Yakagadzirwa, uye ne, vanhu vanorarama nekukuvara kwehuropi; nhengo dzinoshingaira kutora chikamu mukati mese zvivako zvepurogiramu.
Chirongwa chedu chinotungamirwa nenhengo uye nhengo dzinokwanisa kuuya pamwe chete pamusangano wekanzuru wenhengo wemwedzi wega wega kuti tishande pamwe nevashandi kugadzira chirongwa chechirongwa chinonyatso kuzadzisa zvinodiwa neboka. Zuva rega rega nhengo dzinotora chikamu muhurongwa hwepa-saiti senge art, bhajeti, kubika, komedhi yakanaka, theatre, kutamba, kunyora kwekugadzira, art therapy nemitambo yekunze neyemukati. Isu zvakare tine tarisiro yakasimba pakubatanidzwazve munharaunda uye kupa nhengo simba kuti dzidzokere munharaunda dzavanogara. Imwe nzira yatinoita nayo izvi kuburikidza nekubatana kwatakaitwa nenhengo-yakasarudzwa munharaunda sekuenda kumabhaisikopo, gorofu, kukwira makomo, bowling, kushanyira raibhurari yeko, kushanya mamuseum, kuenda kunonwa kofi, kana kuzvipira kumabhangi ezvekudya, magadheni emunharaunda nedzimwe nzvimbo. . Vashandi vedu vepurogiramu vanoshanda nesimba kuti vaone nzvimbo dzinowanikwa kune nhengo dzine zvakasiyana-siyana zvenyama.
Nhengo dzechirongwa dzichashanda nevashandi kugadzira zvirongwa zvemunhu ega zvinovatendera kuti vagadzirise ruzivo rwavo paHinds' Feet Farm nekugadzira zvibodzwa zvakasarudzika zvenguva pfupi. Vashandi vanozoshanda nenhengo mukati mezuva rese kutora matanho ekuzadzisa zvinangwa izvi.
Isu tinofara kuva nevashandi vanobva kwakasiyana-siyana kwakasiyana-siyana uye dzidziso dzinosanganisira kutandara kwekurapa, basa rekugarisana nevamwe, art therapy, hutano hwepfungwa, hurema hwekusimudzira uye kushandisa zvinodhaka. Tine zvakare vadzidzi nevanodzidzira basa kubva kumakoreji emuno uye enyika nemayunivhesiti. Vadzidzi ava vanokwanisa kudzidza nekukura vachishanda pamwe chete nenhengo dzeHinds' Feet Farm nevashandi muboka uye nezvirongwa zvemunhu. Isu tinogamuchirawo vanozvipira munharaunda vanokwanisa kutenderedza chirongwa chedu neakasiyana ezvipo uye zviitiko.
Hinds' Feet Farm inoyedza kuzadzisawo zvidikanwi zvakasiyana-siyana zvemhuri dzenhengo. Mhuri nevachengeti vanogona kukudziridza denderedzwa revezera ravo nerutsigiro rwehunyanzvi nekutora chikamu mune shamwari uye mabiko emhuri panzvimbo yega yega yechirongwa pamwe nemapoka ekutsigira anotungamirwa nevezera. Isu tinodyidzanawo nevemunharaunda Brain Injury Association yeNorth Carolina (BIANC) mapoka ekutsigira uye tinokwanisa kubvunza mhuri nezvezvavanoda kuti vabatanidze nezvimwe zviwanikwa zvenharaunda.
Isu tiri kugamuchira zvinotumirwa kune ese edu Huntersville uye Asheville Day Zvirongwa!
Zuva Chirongwa Admissions Criteria
Iva nekukuvara kwehuropi (kushungurudza kana kuwanikwa), uye uve nemakore angangoita gumi nemasere.
Iva anokwanisa kuzadzisa zvido zvake, kusanganisira kutora mishonga, kana kuva nemutarisiri wega kana nhengo yemhuri inovabatsira.
Usashandise doro kana zvinodhaka zvisiri pamutemo panguva dzechirongwa; kushandiswa kwefodya munzvimbo dzakatarwa chete.
Kana iwe uchida kutariswa kubvumidzwa kweZuva Chirongwa, ndapota zadza fomu riri pazasi uye Day Program Director achasvika kwauri.